Discount PSZ Series otomatiki Kuumba Machine Kugadzira uye Fekitori | XiongHuye
PSZ Series Automatic Kuumba Machine
Muchina wacho wakabatanidzwa neyepasi rese epamberi epamagetsi epakutanga zvikamu nePLC Inogadziriswa Logic Controller (Germany, Siemens) uye chiChinese chekubata screen shower. Iine akawanda ekuzvidzivirira uye maalarm masisitimu, ari nyore kuvhiyiwa kuti aite otomatiki kugadzirwa kubva pakudya, kupisa tembiricha, mugove, kumanikidza, nezvimwe.
Inoshanda munzira mbiri: kudyisa zvakajairika uye kumanikidza kudyisa zvinhu, uye iwo ma modhi maviri anogona kuchinjiswa sechimiro uye fomu yeforoma. Izvo zvinosarudzika kune yakazara otomatiki uye semi-otomatiki nzira.
Muchina une equilibrium vharafu kuverengera hwemvura uye tembiricha yakatsiga, uye zvishoma hwemvura kushandiswa.
Muchina unofambiswa ne hydraulic kumanikidza nekutsanya / inononoka kusiyanisa system kuona nguva chaiyo yekuvhuvhura kuvhura nekuvhara mune yakachengetedza nguva uye kugadzikana kushanda.
5.Vacuum Sisitimu (inosarudzika)
Muchina uyu une yakanakisa yekuzora system yekumhanyisa chigadzirwa kuumba kumhanya, ipfupi nguva yekutonhora & kudzikisira chigadzirwa chemvura.
Iyo muchina inogona otomatiki uye inoshanda kuita kupisa, kutonhora, kudyisa uye ingot yekutora maitiro ekugadzirisa kune akasiyana EPS zvigadzirwa. Nzira dzakasiyana siyana dzekupisa dzinogona kushandiswa sarudzo senge yechigadzirwa fomu kuti uve nechokwadi chehunhu hwechigadzirwa. Yepombi uye isina kunaka kumanikidza sisitimu inogona kuona yakaderera mvura zvemukati, nekukurumidza kuumba, uye ipfupi yekuomesa nguva (kana isina kuomesa).
Chinhu Chidimbu \_ Muenzaniso PSZ120 PSZ140 PSZ175 PSZ2000
Kukura kweMold mm 1200 × 1000 1400 × 1200 1750 × 1450 2000 × 1600
Yakagadzirwa Zvigadzirwa Saizi mm 1080x900x330 1320x1090x330 1600x1290x330 1750x1400x330
Mufuru Kuvhura Kure mm 1400 1620 1620 1620
Steam Kushandiswa kg / kutenderera 7 9 10 11
Kutonhora Mhepo Kunwa kg / kutenderera 45-138 50-150 60-190 65-200
Yakamanikidzwa Mhepo Kunwa m³ / kutenderera 1.5 1.8 2 2.2
Yakadzvanywa Mhepo Kumanikidza mpa 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
Vacuum Pump Mhepo Kubvisa Mari m³ / h 165 230 280 280
Dhizaini Yekugadzira sec 60-150 60-150 60-150 60-150
Yakaisirwa Simba kw 9.1 12.1 14.1 14.1
Kunze Kwekunze mm 4600x1850x3300 5000x2050x3700 5000x2400x4000 5000x2650x4150
Yakaiswa Kurema kg 3200 4300 4850 5300
EPS Rakaumbwa richigadzirisa Machine anowanzotsigi- kushandiswa kubudisa EPS furo kavha bhokisi, ICF nechigumbuso, misa nekongiri muwedzero, pasi mhango block, hourdis, vakarasika furo Kudzingwa, decoration cornice, sirin'i bhodhi, mbiru, ngowani, etc
Pashure: Semi-otomatiki Type Achigadzira Machine
Zvadaro: Yakazara otomatiki Vacuum Panel Machine